MPM Program ဆိုတာ - MPM AIT Myanmar
MPM Program ဆိုတာ
🎓 MPM Program ဆိုတာ ဘာလဲ🎓 MPM Program ကို ဘာကြောင့်တက်ရောက်ခဲ့တာလဲ🎓 MPM Program ကနေ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရခဲ့လဲ🎓 MPM Program ကို တက်ရောက်ချင်သူတွေအတွက် ဘယ်လိုအကြံပြုပြောကြားချင်လဲစတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး MPM Program ကျောင်းသားဟောင်းအချို့ရဲ့ ပြောပြချက်တွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်==============================MPM Program ဆိုတာ ထိုင်းနိုင်ငံ Asian Institute of Technology (AIT) တက္ကသိုလ် က ပို့ချတဲ့ Academic Program တစ်ခုပါ။ AIT တက္ကသိုလ် Department of Civil and Infrastructure Engineering ဌာနရဲ့ Construction, Engineering and Infrastructure Management (CEIM) လက်အောက်မှာ သင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ Master degree in Project Management (with specialization in Construction Project) ဖြစ်ပါတယ်။MPM Program ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံအထိ သွားရောက်စရာမလိုဘဲ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ တောင်ကြီးမြို့တို့မှာတင် တက်လို့ရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်း ကာလအားဖြင့် ၁ နှစ်သင်ယူရမှာဖြစ်ပြီး ဘွဲ့ယူတဲ့အခါမှာတော့ AIT ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားမှာ ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် လက်ရှိ အလုပ်ကနေ အလုပ်အကိုင်မပျက်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ Career ကို မြှင့်တင်ဖို့အတွက် Professional Master Degree ကို ရယူနိုင်မယ့် Program ဖြစ်ပါတယ်။==============================MPM Program ရဲ့ အပတ်စဉ် (၁၀) MPM 10 ကို လာမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ မန္တလေးမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်လိုသူများအနေနဲ့ စတင်၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီMPM Program နှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကရန်ကုန်အတွက်မချယ်ရီမြင့် (Program Officer)Tel. (09) 796 500 086Email: cherrycherry.196067@gmail.comမန္တလေးအတွက်မချိုဇင်အောင် (Program Officer)Tel. (09) 420 773 902Email: czaung.98765@gmail.comနေပြည်တော်နှင့် တောင်ကြီးအတွက်ဦးအောင်မျိုးသိုက် (Program Partner) Tel. (09) 785 157 276Email: amthaik@gmail.com, unetwork2006@gmail.comတို့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်#MPM#AIT#Project_Management#Construction#Master_Degree
Posted by MPM AIT Myanmar on Wednesday, 11 December 2019
MPM Program ဆိုတာ ဘာလဲ
🎓 MPM Program ကို ဘာကြောင့်တက်ရောက်ခဲ့တာလဲ
🎓 MPM Program ကနေ ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရခဲ့လဲ
🎓 MPM Program ကို တက်ရောက်ချင်သူတွေအတွက် ဘယ်လိုအကြံပြုပြောကြားချင်လဲ
စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး MPM Program ကျောင်းသားဟောင်းအချို့ရဲ့ ပြောပြချက်တွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
MPM Program ဆိုတာ ထိုင်းနိုင်ငံ Asian Institute of Technology (AIT) တက္ကသိုလ် က ပို့ချတဲ့ Academic Program တစ်ခုပါ။ AIT တက္ကသိုလ် Department of Civil and Infrastructure Engineering ဌာနရဲ့ Construction, Engineering and Infrastructure Management (CEIM) လက်အောက်မှာ သင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ Master degree in Project Management (with specialization in Construction Project) ဖြစ်ပါတယ်။
MPM Program ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံအထိ သွားရောက်စရာမလိုဘဲ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနဲ့ တောင်ကြီးမြို့တို့မှာတင် တက်လို့ရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်း ကာလအားဖြင့် ၁ နှစ်သင်ယူရမှာဖြစ်ပြီး ဘွဲ့ယူတဲ့အခါမှာတော့ AIT ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားမှာ ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လက်ရှိ အလုပ်ကနေ အလုပ်အကိုင်မပျက်ဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ Career ကို မြှင့်တင်ဖို့အတွက် Professional Master Degree ကို ရယူနိုင်မယ့် Program ဖြစ်ပါတယ်။
MPM Program ရဲ့ အပတ်စဉ် (၁၀) MPM 10 ကို လာမယ့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ မန္တလေးမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်
တက်ရောက်လိုသူများအနေနဲ့ စတင်၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ
MPM Program နှင့် ပတ်သက်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက